Home » Lahatsoratra farany farany » Safety » Rivo-doza mahery setra no namono olona 11, naratra an-jatony tany Sina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Vaovao • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Namely ny tanàna sinoa any Nantong ny rivo-doza
Olona 11 matin'ny rivodoza tany Sina
3000 ny olona nafindra toerana noho ny rivodoza mahery
Mpikambana ekipa sivy avy amin'ny sambo fanjonoana iray nivadika tamin'ny tafio-drivotra no tsy hita popoka
Nisy rivodoza mahery vaika namely ny tanàna atsinanan'i Nantong, Nantong omaly alina, ary namono olona 11 farafahakeliny ary olona maherin'ny zato no naratra.
Ny rivotra mahery dia nanongotra ny hazo, nandriatra ny tampon-trano sy ny tarehy tamin'ny tranobe ary nandefa potipoti-javatra mampidi-doza manidina amin'ny arabe feno olona fito tapitrisa mahery.
Ny ankamaroan'ny olona namoy ny ainy dia voadonan'ny hazo nianjera sy ny andry telefaona na notsofina tao amin'ny renirano Yangtze izay namakivaky ny tanàna manodidina ny 62 kilaometatra miala an'i Shanghai.
Mponina manodidina ny 3,000 no nafindra toerana hiala ny tanàna satria nisy havandra vaventy nilatsaka tamin'ny faritra.
Ny tompon'andraikitra ao an-toerana dia manao asa famonjena ankehitriny hahitana ekipa ekipa sivy tsy hita popoka avy amin'ny sambo fanjonoana nivadika tamin'ny tafio-drivotra. Hatreto dia mpikambana roa hafa no efa avotra soa aman-tsara.